Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa AirPower-ka oo Apple uusan aqoon sida loo fuliyo | Waxaan ka socdaa mac
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa AirPower-ka oo Apple uusan aqoon sida loo fuliyo
Xiaomi ayaa dhowr saacadood ka hor qabatay munaasabad lagu soo bandhigayo khadka cusub ee taleefannada casriga ah, munaasabaddaas oo fursad u heshay inay soo bandhigto qalabyo qaar ka mid ah, taas oo aan ku muujineyno mid. dekedda lacag la'aanta ah ee u shaqeysa sida AirPower u shaqeyn lahayd haddii Apple sii deyn lahayd.
Shirkadda Aasiya waxay sheeganeysaa inay bilowday inay ka shaqeyso saldhigan lacag bixinta ah isla maalintaas Apple ay joojisay mashruuca, laba sano ka hor. Iskuxidhkaan 'AirPower' wuxuu na siinayaa naqshad isku mid ah, xoogaa yar oo wareegsan waxaana ka mid ah 19 duubista lacag bixinta si dadka isticmaala ay u dhigi karaan aaladaha meel kasta oo saldhigga ah.
Si loo muujiyo hawlgalkeeda, wuxuu si sax ah u adeegsaday iPhone (sawir madax u ah maqaalka). Inbadan waxay ahaayeen saldhigyo xukun oo u ekeysiinaya AirPower, hase yeeshe, kuwan ku dar laba jago oo go'an meesha la dhigayo qalabka lagu dalacayo marka lagu daro barta go'an ee Apple Watch, sida kuwa ay soo bandhigtay soo saaraha Nomad ku dhowaad 150 euro.
Dhaqdhaqaaqa Xiaomi ayaa si gaar ah u soo jiitay taas suuqa ku dhufan doonaa qiyaastii $ 90, oo leh awoodda ugu badnaan ee 20W qalab kasta. Saldhigga ayaan la jaan qaadi karin Apple Watch laakiin la’aanta AirPods oo xilligan lama oga inuu Shiinaha ka soo baxayo, waxay u badan tahay.
Intii lagu guda jiray soo bandhigida, Xiaomi waxay sheegaysaa inay qaadatay laba sano xalliyaan dhibaatada kuleylka AirPower, waana sababta Apple ay ugu dhawaaqday 29-kii Maarso, 2019 taas baajiyay mashruucan iyadoo "aan awoodin inay la kulmaan heerarkooda sare."
Xiaomi waxay ku jirtay suuqa muddo dhowr sano ah, iyadoo siineysay alaab tayo leh qiimo dhimis, marka haddii saldhiga lacag-bixinta uu u shaqeeyo sida ay dhab ahaan u sheeganeyso, sida ay sameyn laheyd AirPower (in kastoo haddii ay la jaan qaadi karto Apple Watch) hubaal inbadan oo idinka mid ah ayaa isku dayi doonta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa AirPower-ka oo Apple uusan aqoon sida loo fuliyo
Waxaa horey u jiray tixraacyo WebKit ee macOS 12 iyo iOS 15
Radarsada khariidadaha Apple waxay gaarayaan dalal badan